Maxay Isku Khilaafeen Madoobe Iyo Mucaaradka? | Xaqiiqonews
Maxay Isku Khilaafeen Madoobe Iyo Mucaaradka?
Hogaamiyaasha Ku Sugan Kismaayo ayaa waxaa soo kala dhaxgalay madmadow ka dib markii la isku khilaafay shir lagu waday in Kismaayo lagu qabto.
Xasan Shiikh iyo Shariif ayaa sheegay in sababta Kismaayo ay tageen aysan aheyn oo kaliya Caleemo saarka Axmed Madoobe, iyagoo sheegay in ay doonayaan in Kismaayo lagu qabto shir ka dhan ah Dowladda federaalka.
Sida ay xogta sheegeyso Axmed Madoobe iyo Deni ayaa ka soo horajeystay fikirkaasi, taasi oo ugu dambeyn sababtay in uu baaqdo kulanka lagu waday in uu qabsoomo.
Sidoo Kale Aqri Kismaayo Dalxiiska Mucaaradka !
Shariif iyo Xasan Shiikh ayaa wajahaya guul-darro siyaasadeed, ka dib markii ay waayeen mid ka mid ah ajandayaashoodii ugu cuslaa, xilli Axmed Madoobe uu isku dayaayo in uu si un tanaasulaad u sameeyo.
Dhanka kale DF-ka Soomaaliya oo ay ka muuqato xeelad yari baahsan, ayaa sheeda kore kala socoto waxa ka dhacaya Kimaayo,iyadoo dareensan in Dhacdooyinka Kismaayo ay ka baxsanyihiin awoodeeda.